၎င်းသည်အဝတ်၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းမှနေ၊ နေ၊ လိင်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများနှင့်အတူနေခြင်းနှင့်တူသည် - သတင်း
၎င်းသည်အဝတ်၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းမှနေ၊ နေ၊ လိင်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများနှင့်အတူနေခြင်းနှင့်တူသည်
Ah Sun, Sex နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများ၊ သင်ဟာနူးညံ့သောသုံးပွင့်ဆိုင်အနမ်းနှင့်ကြည့်ရှုရမည့်အထင်ကရပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစိမ်းအင်္ကျီထိပ်များနှင့် Blackpool မှယောက်ျားများမှထွက်လာသည့်နေလောင်နေသောကျောများ။ 'ya ya ya ya' ။ ကုန်းမြေရုပ်မြင်သံကြားသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် Homes Under the Hammer ၏သဲကန္တာရဖြစ်မလာမီက Netflix သည်ကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်မှီအချိန်ကပိုမိုရိုးရှင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းပြပွဲမှာနေရတာဘာလဲ။ ဒီကလေးတွေဟာ 'ငါ' ဝတ်ထားတဲ့ကမကထပြုသူကမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနေတာကိုအဖေသိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လို့ခံစားရသလား<3 Zante' bum bag? What is it like puking watery blue liquid in front ofamassive camera? To find out, I spoke to Lancashire's Liam Gaskin who appeared on the third season with his best mate Gemma.
သူ၏ Maga အချိန်ကာလ၏အချို့သောအချိန်များတွင်နေ့နက်ကျယ်ဝန်းသည့်သက်မဲ့သတ္တုတိုင်ကိုခိုးယူခြင်း၊ ဘားတန်းရှိစင်မြင့်ထိပ်ပေါ်၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ ကျပန်းမိန်းကလေးငယ်များမှသူ၏ဘောလုံးအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံယူခြင်းနှင့် Gemma ပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက် Gemma နှင့်အတူအော်ဟစ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ သူမ၏တင်းကျပ်စွာထုံးအစိမ်းရောင် mankini တက်တစ်နေရာရာသူမ၏ယူရိုသုံးခု။ ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးသူဘာကြောင့်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။
သင်သည် Sun၊ Sex နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများကိုသွားနေစဉ်အလွန်ထင်ရှားသည်မဟုတ်လော။
နက်နက်နဲနဲသိခဲ့တာ၊ ငါတို့ကောလိပ်မှာတက်ခဲ့ကြရတယ်၊ Deal or No Deal တို့လိုတစ်ခုခုအတွက်လျှောက်ချင်ခဲ့ကြပြီးဒီအားလပ်ရက်ကြီးကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့လျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်မတို့အိမ်ကိုလာပြီးမေးခွန်းတွေမေးလာကြတယ်။ ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ Sun, Sex နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများဆိုတာသိသာထင်ရှားသည်။ မေးခွန်းများအားလုံးသည် 'တစ်ညမှာမင်းဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာမင်းရဲ့မိဘတွေသိသလား' ကဲ့သို့ဖြစ်သည် မင်းတို့မိဘတွေကမင်းကိုပစ်ချလိုက်တဲ့အခါမင်းကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
သူတို့သည်တင်းကျပ်သောမိဘများရှိသောလူများကိုရှာဖွေနေကြရာသူတို့၏စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရသည့်အခါထွက်လာသောအခါစိတ်ဒဏ်ရာပိုမိုရရှိလိမ့်မည်။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကြားချင်တာကိုငါတို့ပေးခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမက်ဂလွမ်ကိုတစ်ပါတ်သွားမယ်လို့ပြောပြီးအားလုံးကယူရို ၄၀၀ နဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြတယ်။
တစ်နေ့ကျတော့ငါတို့တကယ်သူတို့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေတဲ့အတွက်စောစောပိုင်းညမှာသွားမယ်လို့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုပြောခဲ့တယ်။ ငါတို့ဟိုတယ်အခန်းကိုတက်သွားပြီး ၂ နာရီစောင့်ပြီးချွတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဆင်းလာတဲ့အခါသူတို့အားလုံးဟာရေကန်ဘေးမှာထိုင်နေကြတယ်။ ကင်မရာကြောင့်လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ချွတ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုတဲ့အခါအခမဲ့သောက်စရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ မထိုက်မတန်သောလူများ၏ဝန်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ ဒါကအကောင်းဆုံးနည်းနည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ညမှာကျွန်တော်တို့ဟာကင်မရာအဖွဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုမှအခြားအုပ်စုတစ်စုသို့ဝင်ခွင့်ရခဲ့လို့အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သူတို့ကင်မရာအဖွဲ့သားတွေနဲ့မတွေ့ခဲ့ရ။ သူတို့ကသူတို့ထွက်ပြေးခဲ့မှာပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုမြင်ပြီးရိုက်ခတ်သွားပြီးရိုက်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေစစပြုလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အတူသွားမယ့်အစားပြပွဲအပေါ်တကယ်အကာအကွယ်ပေးသလိုပဲသူတို့ကိုလှည့်စားတာမဟုတ်၊ လိမ်လည်သူတွေလို့ပဲပြောနေတာသူတို့နဲ့စပြီးငြင်းခုံခဲ့ကြတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေကငါတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ထားတယ်။
ဒီကောင်လေးသည်ယခုအခါစာရင်းအင်းလုပ်ငန်း (သို့) တစ်စုံတစ်ရာသောလုပ်ဟန်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်
ဟုတ်တယ် တစ်ညမှာငါတို့ Magaluf ရဲ့အဓိကနေရာကိုဝင်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ဘရိတ်အလယ်မှာမဆိုဒီဘားကိုသွားခိုင်းတယ်။ ဒါဟာငါတကယ်တော့ခဲ့ဖူးသမျှအဆိုးဆုံးဘားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ မှလွဲ၍ ငါတို့မှတပါးအဘယ်သူမျှမရှိ။ ထုတ်လုပ်သူများကိုအခြားတစ်နေရာသို့သွားရန်တောင်းပန်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည် 'တစ်နာရီခန့်သာနေကြစို့' ဟုဆက်ပြောကြသည်။ ကျနော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းမှာမိဘတွေဟာလသာဆောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရတာနေရာတစ်ခုအမြဲရှိနေတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ အဲဒါကသူတို့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာပဲ။
ကင်မရာအပြင်မှာထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရာရာလုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤစင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီးထိုတွင်ကခုန်နေသည့်အကများရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် 'သူမအနားသို့စစလိုက်လျှင်ရယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်' နှင့်သူတို့ကဒီဇာတ်စင်ကိုရိုက်ကူးရန်စင်မြင့်ကိုပိတ်ဆို့ရန်လုံခြုံရေးရှိကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့အဝတ်အချည်းစည်းရလာတယ်။
Liam (ဘယ်ဘက်) နှင့်သူ၏အစင်းအဆွေဖော်
သူတို့ဘယ်မှာဆယ်ကျော်သက် mom, 1
Sun, Sex နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မိဘများသည်သင်၏ဘဝအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သနည်း။
ငါ့မွေးရပ်မြေမြို့မှာငါအမြဲတမ်းသတိထားမိလာတယ်။ ငါအလုပ်နှင့်အတူဝေးအခါ၌ပင်ဖြစ်ပျက်။ ငါ Butlins မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကလာပြီး 'မင်းကိုငါအသိအမှတ်မပြုဘူးလား' လို့ပြောလိမ့်မယ်
ငါယောက်ျားတွေထဲကတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးဒူးခေါင်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီးငါ့ကိုထိုးနှက်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ ငါလိင်တူချစ်သူပါ။ ဒါကြောင့်သူငြင်းဆန်တဲ့အခါငါစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။ သို့သော်ထို့နောက်သင်သည်ဤအရာများအပေါ်အလွန်မူးနေပြီးသင်အနည်းငယ်နာမကျန်းဖြစ်နေသည့်အတွက်သင့်ကို ပို၍ ပင်မူးယစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်က၎င်းကိုသင်ခံစားနေသည်ဖြစ်စေမပျော်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမှုလုံးဝမရှိပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကဤဗီဒီယိုသည်ယောက်ျားလေး ၅၀ ခန့်ကိုစို့စို့နေသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် ၀ တ်ရုံ ၀ တ်ဆင်ပြီး၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သီးသန့်သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိပါ
တစ်ညကျတော့ကျွန်မ mankini ကိုသူမသုံးယောက်လိုမျိုးလုံခြုံအောင်ထားဖို့ငါနှင့် Gemma ကအငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးသည် ၂ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်သော်လည်းည ၈ နာရီမှညအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူများအားလုံးထိုအရာကိုသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Gemma နှင့် Liam ၏ထပ်မံကျ
ဆယ်ကျော်သက် ၃၀ ခန့်ရှေ့တွင်သင်၏ဘောလုံးပေါ်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုက်သည့်အကြောင်းရိုက်ကူးပြီးပါကအလုပ်ရနိုင်သေးသလား။
ငါပြည်ပမှာစုံတွဲများအတွက်အားလပ်ရက် repping အားလပ်ရက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဘယ်တုန်းကမှပြproblemsနာမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဆင့်မြင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းကိုဂူဂယ်လိုလုပ်ရင်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှတကယ်တမ်းရှေ့နေဖြစ်လာမလဲ။